Isutaga Suxufiyenta Soomaaliyeed ee FESOJ oo dood cilmiyeed mihiim ah ku qabatay magaalada Muqdisho+Sawirro – Somali Top News
Isutaga Suxufiyenta Soomaaliyeed ee FESOJ oo dood cilmiyeed mihiim ah ku qabatay magaalada Muqdisho+Sawirro
August 18, 2019 August 18, 2019 Somali Top News	0 Comments Isutaga Suxufiyenta Soomaaliyeed ee FESOJ oo dood cilmiyeed mihiim ah ku qabatay magaalada Muqdisho+Sawirro
Isutagga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ ayaa hoteelka Jazeera ee magaalada Muqdisho waxaa uu ku qabtay dood cilmiyeed la xiriirta sidii ay wariyayaasha u heli lahaayeen xogta dadweynuhu u baahan guud ahaan in ay helaan ,gaar ahaan xilliyada ay dhacaan weeraro ,qaraxyo ama xasarad abuurta jahawareer qatar galin karta helida warka saxda ah.
Waxa sidoo kale doodda lagu jeex jeexay sida uu is-faham dhinacyada oo dhan u dhexmari karo waa suxufiyiinta iyo hey’adaha amnigee kaas u ogolaanaya ama u fududeynaya in qof walba uu qabsado shaqada uu u xilsaaran yahay islamarkaana dhinacba dhinaca uusan ku noqon caqabad.
Doodda waxaa ka qeyb galay wariyayaal mug leh oo shaqeeya ,agaasimayaal ,tifatirayaal ,saraakiil sare oo ka socota booliska iyo Agaasimaha xiriirka iyo warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya iyo xubno matalayay dallada SONSA .
Wariye C/qaadir Ok oo VOA ka tirsan iyo Cali Aden Mumin oo ku hadlay magaca wariyayaasha ayaa iftiimiyay caqabadaha caadiyan ay la kulmaan marka ay timaado helidda xogta iyo gaaritaanka goobahooda shaqo.
General Bariise oo15 sano ee la soo dhaafay ka mid ahaa saraakiisha sare ee Booliska marna Afahayeenka booliska ayaa isna dhankooda ku dheeraaday dhibaatooyin uu xusay in ay sameeyaan wariyayaasha qaar kuwaas oo sida uu xusay qatar galin kara wariyaha laftiisa ama shacabka.
Agaasimaha Goobjoog Xasan Maxamuud iyo Agaasimaha Dalsan Xasan Ali Geeseey ayaa hadallo xoojin ku kabay hadalka wariyayaasha. Xasan Geeseey ayaa carrabka ku dhuftay in lagama maarmaan ay tahay in Dowladda FS ay saxaafadda siiso xogta xiliiga ay u baahan yihiin laakiin aaney waxba faaideyneyn warbaahinta xog waqtigeedii aad uga dib u dhacday isaga oo carrabka ku adkeeyay hadii ay Dowladdu hadli weydo in ay jiri karaan dhinacyo kale oo u warbixiya saxaafadda.
Agaasimaha Xiriirka iyo Warbaahinta Madaxtooyada Abdnur Mohamed Abdinur Mohamed Ahmed ayaa yiri “Bedqabka suxufiyiinta waxaa la dammaanad qaadi karaa marka hay’adaha amniga iyo bahda warbaahinta uu mid waliba ogsoon yahay kaalinta muhiimka ah ee uu ku leeyahay horumarka dalka.
Waxaan si wadajir ah uga hawlgeli doonnaa sidii aan u joogteyn lahayn in wadashaqayn dhaw ay yeeshaan wariyeyaasha iyo Booliisku si ay ugu fududaato tabinta wararka Soomaaliya”
Kulanka dood cilmiyeedka ayaa waxaa furay Xogahayaha Guud ee FESOJ oo faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda kulanka iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in wariyayaasha ay helaan jawi nabdoon oo ay howlahooda shaqo ugu gudan karaan si nabdoon .
Kulanka ayaa waxaa soo xiray Gudoomiyaha Isutagga Suxufiyiinta Soomaaliyeed Abaadir Cabdulqaadir Cilmi oo u mahad celiyay ka qeyb galayaasha sida saraaxadda leh ee ay uga wada hadleen qodobo wax ku ool ah oo taabanaya xorriyadda warbaahinta iyo helitaanka xog laga helo guud ahaan laamaha dowladda.
Muxuu salka ku hayaa socdaalka Madaxweyne Farmaajo ee dalka Jabuuti? →
Times of Israel oo agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya ku tilmaamay nin ay ku fogaatay Yahuud Naceybka
Maleeshiyaadka Cabdi Iley oo dilay in kabadan 30 qof oo shacab ah